कुन बार कुन रंगको कपडा लगाउँनु शुभ हुन्छ ? किन ? जान्नुहोस् ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/कुन बार कुन रंगको कपडा लगाउँनु शुभ हुन्छ ? किन ? जान्नुहोस् !
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसको रंगसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। रंगले हाम्रो भावनालाई दर्शाउँछ। कुनै रंग देख्दा हामीलाई रिस उठ्छ त कुनै रंग देख्दा मन मा शान्ति मिल्छ। त्यस्तै कुनै रंगले मानिसलाई उत्तेजित गर्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक ग्रहको एक आफ्नै रंग हुन्छ जसले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्छ। रंगको सहि प्रयोगले पनि ग्रहको अशुभ प्रभावबाट बच्न सकिन्छ। यस्तोमा, हप्ताको हरेक दिन कुनै न कुनै रंगसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले प्रत्यक दिन बार अनुसारको रंगको कपडा लगाउँदा निकै शुभ हुन्छ।